အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad ဂိမ်းတွေ 2015 - သတင်း Rule
အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad ဂိမ်းတွေ 2015
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “2015 ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး iPhone နဲ့ iPad ဂိမ်းတွေ” စတူးဝပ်သောင်ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 24 ဒီဇင်ဘာလတွင်အပေါ်များအတွက် 2015 08.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
iOS ကိုဂိမ်းကစားအတွက်ရွေးချယ်စရာအဘို့အမှန်တကယ်ပျက်စီးကြောင်းခဲ့ကြ 2015, အနည်းဆုံးနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုမြတ်သောအသစ်ဂိမ်းအပတ်တိုင်းပြန်လွတ်လာနှင့်အတူ. လွတ်လပ်သော developer များအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူ fizzing ခဲ့သည်, သူတို့မကြာခဏသူတို့မှ၎င်းတို့၏ကံဇာတာအောင်ရုန်းကန်လျှင်ပင်.
အရောက်ရှိရန်ကြီးမားတဲ့ longlist ချကျဉ်းမြောင်း 25 ဤနေရာတွင် featured ဂိမ်းအချို့အထင်ကြီးခေါင်းစဉ်ထွက်ဖျစ်ညှစ်ပါဝင်ပတ်သက်, Skylanders Supercharger နှင့်ရီးရဲလ်လက်ဝှေ့မှ2အဆိုပါအလင်းတိုက်ခိုက်ကြရန်, Letterpad နှင့်သင်လှေ Build ဖြစ်ရမည်.
ဤတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည် 25: ၏ဂါးဒီးယန်းရဲ့ရွေး 2015 iOS ကိုဂိမ်းထဲမှာ. နှင့်, ဟုတ်ကဲ့, သင်ဒီမှာတှေ့နိုငျတဲ့သီးခြားက Android ဂိမ်းများကို roundup ရှိပါတယ်.
25. PewDiePie: အ Brofist ၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ
24. Star Wars: သူရဲကောင်းများ၏ဂလက်ဆီ
လစဉ်လတိုင်းအတွက် 2015 သစ်တစ်ခု Star Wars မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုရောက်စေဖို့သလိုပဲ, ကောင်းသောထိုသူအပေါင်းတို့သည်. ဒီပရိတ်သတ်တွေအများဆုံးသဘောကျလိမ့်မည်ဟုတ: Star Wars ရဲ့အမျိုးမျိုးသောခေတ်မှဇာတ်ကောင်စုဆောင်းတခုတခုအပေါ်မှာအလေးထားနှင့်အတူကောင်းစွာဒီဇိုင်းအရေးယူမှုဂိမ်း, ပြီးတော့စကြဝဠာထဲမှာထွက်တိုက်ဖျက်ဖို့အသင်းများသို့သူတို့ကိုငါဖွဲ့စည်း.
23. မှောင်မိုက်: Echo
ကျနော်တို့ရှေ့တော်၌က iOS အပေါ်ထိုကဲ့သို့သော Papa Sangre အဖြစ်အသံသာဂိမ်းကိုမြင်ရပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဒီကွဲပြားခြားနားသည်, သငျသညျလုပ်အသံအပေါ် အခြေခံ. ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြသရန် "အသံမြင်" ကိုအသုံးပြုခြင်း. သူတို့အားအသံလည်းဆွဲဆောင် မှလွဲ. … ကောင်းစွာ, ကျွန်တော်စာကိုလုယူမည်မဟုတ်. သို့သော်ဤသငျသညျတညဉျ့မှာနှောင်းပိုင်းတွင်တစ်ဦးတည်းဆော့ကစားချင်ပါလိမ့်မယ်ဂိမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး - ဒါဟာသင့်ဆိုဖာထဲကခုန်ရှိသည်လိမ့်မယ်.
"ကျနော်တို့သိ. ဒါဟာတာနဲ့တူမကြည့်ပါဘူး. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလွန်ကောင်းသောပဟေဠိဂိမ်းရဲ့ကတိ,"အား developer Simogo ပြောပါတယ် - တစ်နှစ်တာလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်စက်ပစ္စည်းများ6ကျော်ကြားမှု - နှင့်သူတို့ပိုင်ခွင့်ရှိကြ၏. SPL-T ကအရမ်းရိုးရှင်းတဲ့ပုံရသည်: သငျသညျရှက်ထဲသို့ကိုဝေဖို့ screen ပေါ်မှာအသာပုတ်ပါ (ပြီးတော့နောက်တဖန် halves, စသည်တို့ကို). သို့သော်သင်သည်သင်၏မဟာဗျူဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲစတင်အဖြစ်, ဒါကြောင့်သင်၌ယူတာပဲ.
သငျသညျနေရာတိုင်း streaking ကျည်ဆံတွေနဲ့ကောငျးတဲ့အစို့-'em-up ကချစ်ကြလျှင်, သငျသညျ AirAttack ကိုချစ်လိမ့်မယ် 2. ၎င်း၏ဒုတိယကမ်ဘာစစ်ဆောင်ပုဒ်သင်အားဖြင့်ပျံသန်းရှုမြင် 22 ရိုက်ကူးအဆင့်ဆင့်နှင့်ဗုံးခွဲရန်သူတပ်ဖွဲ့များ, နှင့်အံ့မခန်းဂရပ်ဖစ်ဂိမ်းရဲ့အဓိက selling point နေစဉ်, သူ့ရဲ့ဂိမ်းအနုပညာရဲ့ပရိတ်သတ်များအတွက် reassuringly စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်.
AirAttack2ဓါတ်ပုံ: PR စနစ်
20. ပင့်ကူး: အ Shrouded မွန်း၏ရိုးထုံးတမ်းစဉ်
အဖြစ်တာရစ်သမ်-action ကိုဂိမ်းအားကစား sim အဖြစ်, ခရစ်ကက်ကပ်ထားပါ2သငျသညျပြိုင်ဘက်တစ်ဦးအကွာအဝေးဆန့်ကျင်လေးနှင့် Sixes hoicking ဖြစ်ပါတယ်, ဿုံ stripped-down ထိန်းချုပ်မှုနှင့်တောက်ပ-ချောမွေ့ကာတွန်းနှင့်အတူ. The best cricket game on iOS, သို့သော်၎င်း၏စက်ပြင်ကပိုပေါ့ပေါ့ပရိတ်သတ်တွေအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ခရစ်ကက်ရိုက်ကူးဖို့အယူခံလုပ်သင့်တယ်.
သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုကောင်းတစ်ဦးမယ့်-အပ်လိမ့်မည်ဟုနောက်ထပ်ဂိမ်း, ဒီမြို့ကိုဝိုင်းအောက်မှာတစ်မြို့အတွက်အရပ်သားတွေရဲ့ရှုထောင့်ကနေကစားစစ်ပွဲဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏ပုန်းခိုနေသောနေရာတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိမြို့လမ်းမ၌ foraging အကြားသင်၏အချိန်ခွဲထွက်လိမ့်မယ်, with some very hard decisions to be made about the people under your protection.
12. Don’t Starve: အိတ်ကပ် Edition ကို
11. Minecraft: ပုံပြင် Mode ကို
Minecraft: ပုံပြင် Mode ကို
Is thisagame, oragardening-themed meditation app? တစ်နည်းနည်းဖြင့်, it was one of the best things to play on iOS this year. Described by its developer as “a love letter to trees”, it sees you nurturing yours with gentle touchscreen swipes. The game looks and sounds beautiful: the antidote to your mobile-inbox stress.
An engrossing game that allows you to play detective, going over footage of police interviews withawoman whose husband has gone missing, sniffing out clues as you search the database, and get deeper and deeper into, ဟုတ်ကဲ့, her story. Great enough to dispel decades of memories of awful “interactive video” games.
• အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad ဂိမ်းတွေ 2014
• အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad ဂိမ်းတွေ 2013
← တရုတ်လ lander အားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိလကျောက်က New အမျိုးအစား ၏အကောင်းဆုံး Android ဂိမ်းများကို 2015 →